Xaflad Lagu Taageerayo Degmooyinka, M.M,ka iyo Gobolada Cusub. - Cakaara News
Xaflad Lagu Taageerayo Degmooyinka, M.M,ka iyo Gobolada Cusub.
Awaare( cakaaranews ) Arbaco 2da March 2016, Xaflad balaadhan oo loogu dabaaldagayo go’aankii geesinimada lahaa ee ay qaateen hogaaminta XDSHSI, iyo Golaha Baarlamaanka DDSI Islamarkaana ay ku ansixiyeen 25,ka Degmo, 2da mm iyo 2da Gobal ayaa ka dhacday magaalada Awaare ee Xarunta Degmada Awaare ee Gobolka Jarar.
Xafladan dabaaldaga ah ayaa Waxaa ka soo qaybgalay maamulka Degmada, Odayaasha Haweenka, dhalinyarada iyo Ardayda Dugsiyada waxaana ugu horayntii ka hadlay Gudoomiyaha Degmada Awaare Mudane Cabdiwahaab Maxamed Shugri oo sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin ansixinta 25, Dagmo, 2 Gobal iyo 2,MM isagoo gudoomiyuhu ku tilmaamay in arintani tahay hormar balaadhan.oo deegaanka u soohooyday. Waxa kale oo uu sheegay in ay taageersanyihiin, bulshada Ree-Awaarena ay aad usoo dhawaynayso go’aan ka geesinimada leh ee ay qaateen Hogaaminta XDSHSI iyo waliba Golaha Wakiilada Shacabka DDSI. Ugudanabayna waxa uu u hambalyeey dhamaanba bulsha waynta DDSI.
Sidookale, waxaa dhinacooda kahadlay qaarkamida Odayaasha iyo dhalinyarada Degmada Awaare iyagoo sheegay inay aad ugu faraxsanayhiin horumarkan balaadhan ee u soo hooyday deegaanka iyagoo u mahadceliayay dhamaanba hogaamintii kadanbaysay in lahelo 25 dagmo oo cusub,2 maamul magaalo, 2 Gobal oo cusub.